Namoaka fanambarana ny mpiasa - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny birao foiben’ny syndicats telo tonta eto anivon’ny sampandraharahan’ny fanan-tany mivondrona ao anatin’ny
- Syndicat des inspecteurs ds domaines et de la propriété foncière de Madagascar (SIDPFM)
- Syndicat des contrôleurs des domaines de Madagascar (SCDM)
- Syndicats des assistants rédacteurs des domaines de Madagascr (SARDM)
Dia manao izao fanambarana manaraka izao :
1- Raha nanao fanambarana (préavis de grève) ny 2 jiona 2015 fa hanohy hitokona ny mpiasan’ny fananan-tany manerana ny Nosy ny 5 jiona 2015 lasa teo dia noho ny :
a- Tsy fanatanterahana ny fifanarahana (protocole d’accord) mahakasika ny Lettre de politique foncière izay hitan’ny tekinisiana malagasy fa tsy mamaly ny hetahetan’ny Malagasy sy tsy mahaaro ny zon’ny Malagasy amin’ny fananan-tany ;
b- Tsy fahazoana valiny mahakasika ny fanafoanana ny didy tsy fahazahoana mangataka sy mikarakara ny fangatahana izay efa misy mahakasika ny tanim-panjakana sy tsy fahazahoana valiny mikasika ny sata manokana izay nampanantenaina anay.
2- Nanomboka ny fitokonana manerana ny Nosy ny zoma 5 jiona 2015 ary ny alatsinainy 8 jiona 2015 dia efa nisy fisokafan’ny fifampiresahana izay nahavelombolo notarihan’Andriamatoa Lehiben’ny kabinetran’ny Minisiteram-panjakana sy ny Tale Jeneralin’ny fananan-tany fa hiezaka ny hamaly ny fangatahana ao anatin’ny herinandro ny fanjakana ary hanao tatitra amin’Andriamatoa Minisi-panjakana mahakasika izany.
3- Raha fanantanterahana ireo fangatahana telo no nandrasan’ny mpiasan’ny fananan-tany ny talata 9 jiona sy alarobia 10 jiona 2015 dia akory ny hatairana sy alahelon’ny mpiara-miasa naharay ny « « « note circulaire N° 033/MEPATE/SG tamin’ny 10 jiona 2015 navoakan’Andriamatoa Secretaire Général mpisolo toerana (Atoa Andianasoloarimina Tiana, Directeur Général de l’Aménagement du Territoire) ;
4- Raha efa nisokatra tamin’ny adihevitra ny mpiasan’ny fananan-tany ny alatsinainy 8 jiona lasa teo dia nihenjana tampoka ny tady avy amin’ny Minisitera tamin’ny alalan’io note-circulaire izay navoakan’Atoa Secrétaire Général io.
5- Marihina fa anisan’ny mahasarotra ny fitadiavana vahaolana hatramin’ny nanombohan’ny fitakiana ny tsy fananan’ny Minisiteram-panjakana Secrétaire Général hatramin’ny nitsanganan’ny Ministera tamin’ny Marsa 2014 ka hatramin’izao ; ary marihina eto fa io Secrétaire Général manao sonia io note-circulaire io dia notendrena tamin’ny alalan’ny « note de service” ;
6- Manoloana io fanapahan-kevitra izay midika fandrahonana sy fampihorohoroana io (sanction administrative, poursuite pénale) io dia manambara ny syndicats telo tonta eto anivon’ny fananan-tany fa :
a- Mitohy ny tolona, mikatona ny biraon’ny fananan-tany manerana ny Nosy ary tsy hijanona raha tsy misy valiny azo tsapain-tanana amin’ny fangatahana rehetra napetraka ;
b- manameloka ny fampihorohoroana sy ny ramatahora atao amin’ny mpiasan’ny fananan-tany izay mijoro sy miady ho an’ny zon’ny vahoaka malagasy 22 tapitrisa mahery ;
d- nanapa-kevitra ny birao ka naka mpisolovava (avocat) hiaro ny mpiasan’ny fananan-tany rehetra tsy ankanavaka mahakasika io note-circulaire io sy izay rehetra didy miendrika faneriterena rehetra mbola ho avy satria dia efa mandeha ny feo mahasika ny « suspension de solde” na fanapahana karama ho an’ny mpiasan’ny fananan-tany ;
7- Miantso ny mpiasan’ny fananan-tany manerana ny Nosy ho tony ary haneho hatrany ny firaisankinantsika hatramin’ny farany ;
8- Ny birao foiben’ny syndicat telo tonta dia misokatra hatrany amin’ny fifampiresahana hitadiavana vahaolana haingana mahakasika ireo fitakiana izay napetraka ireo.